Muuri News Network » Waafoow iyo Kooxdiisa oo ku howlan sidii Nambar Konton loogu soo dhaweyn lahaaTubta Nabadda.
Waafoow iyo Kooxdiisa oo ku howlan sidii Nambar Konton loogu soo dhaweyn lahaaTubta Nabadda.
Jul 31, 2016 - 2 Jawaabood
Waafoow iyo Kooxdiisa ayaa Juhdi dheeraad ah gelinaya goobihii lagu soo dhaweyn lahaa Saraakiisha Tubta Nabadda si ay u xaliyaaan Dagaalka ka dhex aloolsan Beelaha Biimaal iyo Habargidir ee kala dega koonfurta Soomaaliya iyo qeybo ka mid ah Gobolada dhexe ee Dalka Soomaaliya.
Waxaana hada jira is afgarad hoose oo ay wadagaleen Kooxda Waafoow iyo Tubta Nabadda kuwaasoo ku caan baxay qawda maqashii waxna ha u qaban.
Waxaa jiray Xiriir dheer oo ka dhaxeeyay Kooxdaan iyo Tubta Nabadda, kaasoo Beesha Biimaal ka hor joogsaday in Magaalada Marka ay ka saaraan 20 (Labaatan) Mooryaan, marar badan waxaa dhacday in dhalinyaro Badan oo Biimaal ah ay is xilqaamaan si ay u xureystaan deegaanadooda balse ay u suura geliweysay, sababo la xiriira dhaqaalihii iyo Hubkii ay ku dagaalami lahaayeen oo ay cuneen Waafoow iyo Kooxdiisa.
Dhamaadka 2013-kii ayaa ugu dambeysay in la arko qori culus oo ay beesha Biimaal leedahay oo ka qeyb qaadanaya Dagaalka lagula jiro Cadowga, waxeyna Dadka is weydiinayaan waxa ay u qarsadeen Hubkii lagu gaday Magaca guud ee Biimaal, maxey gadaal u marsanayaan Hub loo soo gaday in Cadowga la isaga dhiciyo, ma waxey ka dhigan rabaan Ra’su Maal, waa Su’aalaha ay is weydiinayaan Shacabka ?????
Waxgarad badan oo kasoo jeeda Beesha Biimaal oo xiriiro la sameeyay Waafoow iyo Kooxdiisa, si ay jawaabo uga helaan baahida keentay in ay Tubta Nabada hoos kala heshiiyaan.
Qaar ka mid ah Dadkii la hadlay Waafoow iyo Kooxdiisa ayaa Muurinews.com u sheegay in hada ay u cadaatay cidda dhulka la gashay halgankii Beesha Biimaal.
Waafoow iyo Kooxdiisa ayaa Shacabka Biimaal lacag ugu aruursan jiray in ay wadaan Halgan iyagoona siyaasiyiin ku sugan Magaalada Muqdisho ku eedeyn jiray in ay ka qeyb galeen kulan ay soo qaban qaabisay hey’ada Tubta Nabadda.
Waxaana hada dhibaatada ugu weyn ay ka heystaa Shacabkii ay beeenta u sheegi jireen, mar hadiiba qaban qaabadii lagu soo dhaweyn lahaaTubta Nabadda ay wadaan Waafoow iyo Kooxdiisa.
Kooxdaan ayaa weli Dadka qaar ku mashquulinaya, “Arintaan Biimaal ayaa Wato anaga kaligeena Maaha”!!!!.
Hadii Masiirka Biimaal uu ka go’aayo hal iyo Labo sida Waafoow iyo Labo la socoto, waxaa Warkooda marhore uu meel mari lahaa 7 Xildhibaan oo Dowlada Federaalka ah, 11 Xildhibaan oo Koonfur Galbeed ah iyo Wasiiro 10 ku dhow.
Balse arinta sidaasi maaha Shacabka Biimaal ee ku nool deegaanadooda waxaa ka go’an in ay Xabad isaga saaraan Cadowga kusoo duulay, ee kama go’ana in Tubta Nabadda lagu soo dhaweeyo deegaanadooda
Isha ku haay Muurinews.com
2 Responses to Waafoow iyo Kooxdiisa oo ku howlan sidii Nambar Konton loogu soo dhaweyn lahaaTubta Nabadda.
Shacali Sheikh says:
Numanyoow Waxaan Aad Soo Qoraysaan Waxaan U Aragnaa Wax Kama Jirraa Waayo Aduunka Xabad Lee Wax Laguma Raadiyo Ku Xisaabtan in Magaaladaada Kala Go,an Tahay ilaa Afar Sano Ku Dhawaad,Cadaado iyo Gurri-Ceel iyo Dhuuso Mareebna La Dhissaayo, Ogoow Waxa Dhimmanaayo inay Dadkaaga Yihin,Waxa La Kufsanaayo Dakaaga Yahay,Waxa La Burburaayanna Gurigaagu Yahay Ee ,Maxaad Ka Dhaxashey Xabadda, Mar Baa Wada Hadalka Xal Uu Yahay,Marka Magaalada Marko Cadey Gudaha Ma U Geli Kartid Aawi Faa,idadaada,, Xamad Miyaa,Tafaraaquqana iska Daaya Wabillaahi Towfiiq
01/08 at 9:11 am
koley waa lama huraan in aad u tashato dadkaaga iyo degaankaga haddii ilaah hadeer gumeysi,dil,kufsi,gubid,barakicin oo deganada kalena ay wada dhisan yihiin oo degaanka bimaal hal demo ay nabad ka jirto intii kalena ay dhibaato xoog leh ku habsatay waa in si fiican loo bara oo leysla wada firiya siday ay wax u jiraan koley kuli dabaal duurka loo diro lama wada ehee intaane cidamo degaanka u dhashey wey dagalamayeene bal inta gidaal leysku firiyo oo maskax la isticmaalo meesha ay bada ka qurasan tahay ha leysla firiyo iyo waxii meesha ka talin jiray oo hogamiyaha ka ahayeen sida ay wax u wadi jiriin sida uu ahaa hogaankooda iyo taliskooda ha leysla wada firiyo iyadoo aysan jirin wuji firis oo lagu dhaqmaayo dacada iyo magaca ilaah koley meesha wey jirtay lug laaban oo dacad iyo lilaahi aan u aheyn degaanka bimaal meelo ka mid ah koley wax garad wax looma sheego wax lawane wax looma dhiibto laqdawane weelkeeda ma buusamo ee markii dhigaga aad gadato oo dadkaaga aad rooti ku doorsato waa mid kugu soo maqan maalin waad ku fashilmeysaa oo waadna ku guwaneysaa ee talo iyo wax tar waa tii walaalkaaga han aad uGu cexato rooti oo walaalkaga aad uGu gadato beri ma ku aminaayo waayo waxaas ogyahay shalay in aad ka gadatay walaalkaga oo waxuu is leeyahay adigane beri sidaas ayuu ku gadanayaa oo markasto waa ka degtoon yahay ee markii dambena waa ki ku dili lahaa taas ku seexo kuna soo toos kii walaalkaada aad u disho asiga ayaa ku dilaayo ee rooti wax musqul ee iska ilaali ha ku doorsan walaalkaaga